राम्रो मान्छे र फोटोको वयान | NewsMissile.com
Newsmissile January 29, 2018 कला-साहित्य, समाचार0Comment
– मिलन बस्नेत्
आहा, कति राम्रो फोटो ! मिलेको जिउडाल ! आकाश जस्तो निधार, झरना जस्तो कपाल, चन्द्रमा जस्तो मुहार । यस्तो राम्रो मान्छेको यस्तो राम्रो फोटोको बयान स्वयं ईन्द्रको बाबु चन्द्रले त गर्न सक्दैनन् ।
म त एक मानव न परे । तैपनि एक लाइकसम्म गरेको छु । यस अनुहार फेसबुकको भित्तोमा एक भन्दा बढी लाईक गर्न पाईन्न रहेछ नत्र सारा जिवन यहि फोटोमा लाईक गरेर विताउने थिँए । कस्सम् ढाँटेको होइन !
सानैदेखि धेरै फोटो देखियो तर तपाईको जस्तो फोटो अहिलेसम्म देखेको थिइन ! Aeroplane धेरै देखियो तर तपाईको फोटोको विशालता त्यो Aeroplane मा पनि देखिन निश्चल बगेको पानि पनि देखे तर तपाईको फोटो जति सुन्दर त्यो पानी पनि थिएन गुच्चा त के होर त्यो भन्दा गोलो तपाईको अाँखा light को speed त के होर त्यो भन्दा छिटो चल्ने तपाईको दिमाग सेतो हिउँ पनि देखे तर मा कसम तपाईको फोटो भन्दा सेतो र गोरो त त्यो हिउँ पनि थिएन ।
हजुरको फोटो एकदम राम्रो छ किप इट अप येसरी नै फोटो फेसबुकमा हाल्नुस् एकदिन ठूलो मान्छे बन्नु हुन्छ अनि तपाईको फोटो खिच्ने पनि कुनै DSLR केमरा खेलाउने व्यक्ति भन्दा कम छैन होला Fair &Lovely ले पनि धोका खान्छ हजुरको फोटो देखेर जय हजुरको फोटो फोटो भनेको त एस्तो हुनपर्छ नि हिरा भन्दा कम छैन ।
आजकल जस्तो पायो तेस्तै फोटा हाल्छन् मान्छेहरु तर यो फोटो ३०°,४५° चाही ९०° हेरे पनि सुन्दर देखिन्छ । यो फोटो देखेर जो कोहिलाई पनि फस्ट साइट लभ पर्न सक्छ त्यसैले होशियार हुनु होला ।
Model Sony Kandel
यस फोटोलाई सङग्रहालयमा लगेर राख्ने हो भने पनि लाखौले हेर्न आउने छन् । … करोडौंमा लिलाम पनि हुन सक्छ । मैले एति राम्रो फोटो देखेकै थिएन।
कस्सम कसम से हो के। अझ त्यो चम्किलो मुहारको तारिफ मैले गर्न छुटाए भनेर नरिसाउनु जुन भन्दा चम्किलो धपक्कै बलेको मोहडा आहा कति राम्रो के।
जुनले पनि हजुरको यो चम्किलो मुहार देखेर डाहा गर्छ त्यो केश त्यो आखा त्यो ओठ त्यो हसिलो मुहार आहा साच्चै कति मिलेका र सुहाएका हुन सबै कुरा।
तपाईलाई त भगवानले दिन–रात मेहेनत गरेर यस्तो राम्रो बनाएर पठाएका हुँदा हुन् है । भयो छोडनुस तपाईको सुन्दरताको बयान गर्न त ५०० पानाको किताब नै लेख्नु पर्ने हुन्छ।
त्यसैले यहाँ बयान गरेर साध्य छैन। अझै गर्थे बयान तर ऐले अबेर भइसकेछ ल कीप इट अप जो पायो उसलाई यो फोटो नदेखाउनु होला फेरि हृदयघातको शिकार होलान ल।
जाँदाजाँदै एउटा सल्लाह दिन्छु कि हजुरले यो सुन्दर चम्किलो अनुहार तपाईले यो तस्बिर फेसबुकमा हाल्नु भयो, तबदेखि पृथ्वीलोकमा अन्धकार हटेको छ। लाग्छ कि सूर्य देवले स्वयम सूर्यको बिकल्प बनाएर पठाउनु भएको तपाईको यो ज्वलन्त तस्बिर ।
काठमाडौंको लोड्शेडिङ त के बिश्व कै अन्धकार हटाउन सक्ने क्षमता देख्छन् नासाका बैज्ञानिकहरु तपाईको यो तस्बिरमा । बिज्ञानमा मात्र हैन धर्म क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्न पुगेको छ तपाईको यो तस्वीरले । महात्माहरु भन्छन् यस तस्वीरको प्रबेश प्राचिनकालमा हुनु पथ्र्यो । महाभारत र रामायण जस्ता ठूला ठूला युद्व रोक्ने क्षमता छ रे तपाईको यो धपक्क बलीरहेको अनुहारमा।
तपाईको झलमल्ल बलिरहेको यो तस्वीर आशाको किरण बनेर आएको छ यस पृथ्वीलोकमा बसोबास गर्ने मनुष्य जातमा । लाग्छ कि यो खुला आकाशको पवनमा तपाईको तस्बिर बहीरहेको छ। तपाईको यही तस्बिर देखेर चराहरु चिर्बिराउन थालिसके, कविहरु कबिता रच्न थालिसके, कति मान्छेहरु तपाईको यादमा तड्पिन थालि सके।
पुरै ब्रम्हाण्ड खल्बलाएको तपाईको यस तस्वीरलाई चुनौती दिन सक्ने अर्को तस्बिर समयको अन्त्य हुन अगाडी आउला भनेर मानब जातिकै लागि ठूलो प्रश्न भएर अडिएको छ।
Previous अवैध रुपमा सञ्चालित दुई कजेजमाथि तालाबन्दी
Nextआय-व्यय विवरण बुझाउन दलहरुलाई निर्देशन